Accueil > Gazetin'ny nosy > Antenimierampirenena: Haongana ry Jean Max Rakotomamonjy fa tsy manompo 100% ny Hvm ?
Antenimierampirenena: Haongana ry Jean Max Rakotomamonjy fa tsy manompo 100% ny Hvm ?
Rehefa tsy nahomby na tsy tratra hatramin’ny farany, hono, ny tetika nikasan’ny Hvm hanonganana ny Praiminisitra Mahafaly Olivier Solonandrasana tamin’ny alalan’ny fangatahana latsa-bato fitsipaham-pitokisana dia ny birao maharitra ny Antenimierampirenena, tarihin’ny filohan’io andrim-panjakana io, Jean Max Rakotomamonjy indray no iketrehan’ireo Hvm tetika mba haongana.
Fa maninona, hono, no haongana, hoy ny fanontanian’ny maro ? Ny marina dia tsy Hvm i Jean Max Rakotomamonjy ary tsy Hvm avokoa no mandrafitra ny birao maharitr’ity andrim-panjakana ity fa avy amin’ny vondron-kery maromaro mamaritra ny Antenimierampirenena. Tsy mahafa-po ny Hvm ny raharaha satria tsy manompo ny Hvm 100% izy ireo. Miezaka mampifandanja ny raharaha ankapobeny ry Jean Max Rakotomamonjy mba tsy hisy hahatsiaro hoe « zanak’Ikalahafa » nefa dia tsy izany no andrasan’ny Hvm amin-dry zareo fa ny hanao rapadango samirery ny fahefana sy ny tombontsoa ao anatin’io Antenimierampirenena io. Dia izao itadiavana hevitra izao ny hanonganana ny birao maharitra ao.
Ny hasolo ny filohan’ny Antenimierampirenena hono, raha ny feo mandeha eny Tsimbazaza eny dia i Milavonjy Philobert, izay olom-boafidy avy amin’ny « Malagasy Miara-Miainga » (Mmm-n-dry Hajo Andrianainarivelo), saingy tsy naharitra ny « mena miraviravy » dia nivadika ka lasa nihazakazaka nisalotra ny akanjon’ny Hvm.
Na izany fihetsika izany aza mantsy dia efa mampibaribary ny fanitsakisahan-dry Milavonjy Philobert ny Lalàmpanorenana manan-kery amin’izao fotoana. Ny Lalàmpanorenana mantsy, raha tsiahivina, dia manipika ny tsy fahafahan’ny solombavambahoaka mivadibadika vondrona parlemantera, ary ny Hvm tsy mba nandrotsaka olona nofidiana tamin’ny fifidianana solombavambahoaka, nefa dia lasa manana vondrona parlemantera tampoka rehefa tonga teny Tsimbazaza. Dia isan’ireo nandrafitra ny Vondrona Parlemantera Hvm i Milavonjy Philobert. Lasa isan’ireo solombava « mpanompo mahatoky » ny Hvm ry zareo izao, ary ny Fitsarana avo momba ny Lalàmpanorenana (Hcc) dia mijery fotsiny an’izany fandikana mibaribary ny Lalàmpanorenana nataon’ireo solombava lasa nandrafitra ny Vondrona parlemantera Hvm izany, eny na dia efa nisy fitoriana tonga eny Ambohidahy misy ny lapan’ny Fitsaranan Avo momba ny Lalàmpanorenana aza.
Tena fihetsik’olona mendrika ny antsoina hoe « mpanao pôlitika » ve ny an’ireto Hvm ireto amin’izany rehetra izany ? Mendrika ny hisalotra ny anaran’ny « solombavambahoaka » koa ve raha olona tsy mahari-boakena toa izany fa mivadibadika isa-maraina ?
Fihetsika manala baraka ny maha-mpanao pôlitika izany ary tena fanitsakitsahana ampaladia ny haja amam-boninahitra maha-solombavambahoaka.
Tsy mahagaga anefa izany satria ireo mpiara-dia ao amin’ny Hvm rehetra ireo ange ka saika olona namadika ny rariny sy ny namany avokoa e ! Nanomboka tamin’ny famadihana ny vahoaka malagasy no nataon’ny Hvm tamin’ny alalan’ny fivadiham-pitokisana ara-pôlitika teo amin’ny vahoaka sy ny filoha Rajaonarimampianina, ary hatramin’izao dia tsy mitsahatra izany fivadihan’ny Hvm amin’ny vahoaka malagasy izany.
Azo ambara ho fivadihana ihany koa izao tetika kotrehin’ny Hvm hanonganana ny birao maharitra ny Antenimierampirenena tarihin’ny filohany, Jean Max Rakotomamonjy izao.